Ny mpanao gazety Iraniana sy ny famahanana bilaogy any Iran: Varavarankely misokatra hifandraisana · Global Voices teny Malagasy
Ny mpanao gazety Iraniana sy ny famahanana bilaogy any Iran: Varavarankely misokatra hifandraisana
Voadika ny 17 Novambra 2018 6:36 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Septambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manome ny fampahalalam-baovao mivantana ny mpanao gazety Iraniana ao amin'ny bilaoginy. Roa volana lasa izay (2005) dia navoakan'i Webnameh ny sarin'ireo mpanohana an'i Ganji teo anoloan'ny hopitaly talohan'ny namoahan'ny tranonkala hafa na ny gazety izany. Herinandro vitsy talohan'izay, dia nanoratra ireo andro nigadrany, ny fijaliany, ary ny namany nogadraina ihany koa i Hanif Mazroi izay nogadraina tamin'ny taona 2004. Pejin-tantara sarobidy izay manazava amin'ny an-tsipiriany ny andro maizin'ny mpanao gazety nenjehina izany.
Nilaza i Arash Sigarchi ao amin'ny Boky ho an'ny Bilaogera sy ny Mpanohitra An-tserasera fa “afaka manoratra malalaka ao amin'ny bilaoginay izahay“. Marina ny teniny, mpanao gazety marobe no maneho ny heviny amin-kahalalahana kokoa ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Maro tamin'izy ireo no voasambotra vokatr'izany. Sigarchi, Motalebi, Samminejad, … dia anarana vitsivitsy monja amin'ny maro hafa. Aleon'ny sasany manoratra tsy milaza ny tena anarany. Iray amin'izy ireo i FMSokhan izay namoaka ny lahatsorany tao amin'ny Gooya, tranokalam-baovao iray malaza.
Nahita ny famahanana bilaogy ny sasany tamin'ireo mpanao gazety toa an'i Massih Alinejad rehefa very asa izy ireo. Nitatiza ny ao amin'ny Parlemanta Iraniana i Massih (Masomeh) Alinejad. Namoaka ity mpanao gazety maherifo ity tao amin'ny toeram-piasany taorian'ny fanambarany momba ny karama mihoampampana azon'ny solombavambahoaka ny Parlemanta mpandala ny nentin-drazana. Nanomboka naneho ny heviny tao amin'ny bilaoginy izy. Nanakatona ny varavarana ho azy ny Fanjakana Iraniana ary nanokatra varavarankely izy mba hifampiresahana.
Nampiasa bilaogy mba hizarana ny heviny, sary, ny lahatsoratra ankafiziny ary nifandray tamin'ny mpamaky azy ireo mpanao gazety Iraniana. Nozarazaraina sy natsahatra kanefa sarobidy ireo vaovao avy amin'ny bilaogy. Noho izany maha-sarobidy azy izany no nahatonga ireo sasany tany am-ponja.
14 ora izayMaraoka